Madaxweyne Erdo Inan oo ka Warbixiyey Maalgashiga Waddada Tareenka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraMadaxweyne Erdo Inan Wuxuu Ka Warbixiyey Maalgashiga Waddada Tareenka
20 / 01 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
madaxweynaha ayaa warbixin ka siiyay maalgashiga maalgashiga jid-tareenka
Dhaqanka Center '2019 Year of Jidka qaaday by xusay in shirka Review Ra'iisul Wasaaraha Recep Tayyip Erdogan Bestepe National Congress oo siiyey warbixin ku saabsan maalgelinta tareenka gaadiidka Turkiga.
'' Waxaan qaadnay ku dhawaad ​​2019 milyan oo rakaab dhammaanba jidadka tareenkayaga ah ee 245. ''
Isagoo carrabka ku adkeeyay inay muhiimad gaar ah siinayaan tareenka tareenka sidii hore ka badan, Madaxweyne Erdogan wuxuu yidhi, “Ankara, Konya, İstanbul, Khadadka tareenka xawaare sare ku socda ayaa durbaba shaqeynaya. Wadar ahaan, in kabadan 53 milyan oo muwaadiniin ah ayaa ku safray wadooyinka Ankara-Eskişehir-Istanbul iyo Ankara-Konya-Istanbul. Waxaan ku qaadnay ku dhawaad ​​2019 milyan oo rakaab dhammaan wadooyinkayaga tareenka ee 245. Waxaan ku jirnaa kaalinta 8-aad aduunka howlgalka tareenka xawaare sare ku socda iyo 6aad ee Yurub. Waxaan wali ku dhowdahay dhamaadka 1889 km khadka tareenka xawaare sare ku socda ee u dhexeeya Ankara-İzmir iyo Ankara-Sivas. ''
'' Gaadiidka xamuulka iyo rakaabka waxaa lala sameyn karaa khadadka tareenka xawaaraha ku socda. ''
Isagoo sheegay inay dhiseen khadadka loo yaqaan 'YHT kaliya', laakiin sidoo kale ay wataan tareeno xawaare sare leh, Madaxweyne Erdoğan, Bursa-Bilecik, Konya-Karaman, Niğde-Mersin, Adana-Osmaniye-Gaziantep-Çerkezköy-Kapıkule iyo Sivas-Zara waxay caddeeyeen in dhismaha 1626 km ee tareenka xawaaraha dheereeya uu socdo.
Waxaan horumarinaynaa warshadaha tareenka ee gudaha.
Waxa uu sidoo kale yiri: '' Si loo soo saaro baabuur tareenka ee Turkey waxa aanu horumarinta warshadaha ee qoyska. Waxaan aasaasnay ​​xarumo soo saaraya tareen xawaare sare leh iyo gawaarida metrooga ee Sakarya, alaabada tareenka xawaare sare ku socdo ee Çankırı, sariir-xawaare xawaare sare leh oo ku yaal Sivas, Sakarya, Afyon, Konya iyo Ankara, iyo agabka tareenka isku xirka gudaha ee Erzincan. ''
Turkiga Erdogan ayaa sidoo kale soo saari kartaa naaftada tareenka hybrid noocooda iyo shaqayn karaan sidii kayd ah oo ogaaney in dalka 4aad ee adduunka, '' Ilaa hadda, 150 adeegyada cusub ee jiilka siiyey baabuurta xamuulka qaranka. Waxaan soo saareynaa 10 baabuur oo kuwa xamuulka qaada ah oo gudaha ah oo ka socda dalka qeybta koowaad ee sanadkan. ''
326 kun oo tan oo xamuul ah ayaa laga xirey qadka Baku-Tbilisi-Kars. ''
Isagoo hoosta ka xariiqaya in khadka BTK iyo Marmaray ay yihiin khadad tareen oo caalami ah oo caalami ah, Madaxweyne Erdoğan wuxuu yiri, “Tareenka ugu horreeyay ee ka yimaada Shiinaha bishii Nofeembar ee la soo dhaafay wuxuu gaadhay caasimadda Czech Republic 18 maalmood isagoo isticmaalaya isku xirka Marmaray. Khadkan, waxaan sidoo kale ku xoojineynaa xiriirka annaga oo ku dareyna rakaabka rakaabka iyo sidoo kale xamuulka xamuulka. ''
Erdogan wuxuu bixiyay macluumaad ku saabsan khadadka xawaaraha sare
Izmit, maaha war ku filan oo ku saabsan taraamka
Wasiirka Elvan oo warbxin ku saabsan maalgashiga
Ra'iisul Wasaaraha Erdogan ayaa ka hadlay kharashka gaadiidka ee Edirne
sariirta degdega ah ee seexashada
Niğde Mersin xawaare sare
Sivas Zara khadka tareenka xawaare sare ku socda
gawaarida tareenka ee guriga
xajiyeyaasha xadiidka guriga